दलहरुलार्इ मुख्यमन्त्री छान्ने चटारो, यी हुन चर्चाका उम्मेदवार ! - Everest Dainik - News from Nepal
दलहरुलार्इ मुख्यमन्त्री छान्ने चटारो, यी हुन चर्चाका उम्मेदवार !
काठमाडौं, ८ असोज । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तर्फ सबैको ध्यान केन्द्रीत भएको छ । दलहरुले मंसिरमा हुने चुनावका लागि सातवटै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीको उम्मेदवार छनौटको गृहकार्य शुरु गरेका छन् । मुलुकमा पहिलो पटक कार्यान्वयन हुन लागेको मुख्यमन्त्रीको पदका लागि दलका युवा नेताहरु आकाक्षी देखिएका छन् ।
प्रमुख दलहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका युवा नेताहरु मुख्यमन्त्रीको दौडमा लागेका हुन् । प्रदेश सरकार प्रमुखको रुपमा काम गर्नका लागि सक्षम उम्मेदवारहरुको चर्चा पनि सुरु भएको छ । माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर एकका लागि मुख्य मन्त्रीमा गोपाल किँरातीलाई उठाउने तयारी गरेको छ भने अन्यमा गृहकार्य भइरहेको छैन् ।
प्रदेश नम्बर २ मा मात्रिका यादवको चर्चा भएपनि अन्य प्रदेशहरुमा माओवादीका मुख्य मन्त्रीको उम्मेदवार छान्न सकेको छैन् । माओवादीले दशैं लगत्तै मुख्य मन्त्रीका उम्मेदवारहरुको टुंगो लगाउने बताएको छ ।
कांग्रेस र एमालेभित्र ठूलादेखि युवा नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा उठाउने चर्चा सुरु भएको छ । पूर्व मन्त्रीहरुदेखि लिएर हालका सांसदहरुसम्मले मुख्यमन्त्री बन्न रुची देखाएका छन् ।
प्रदेश नम्बर एकमा नेपाली कांग्रेसले युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मालाई मुख्य मन्त्री उठाउने सम्भावना रहेको छ । नेविसंघका पूर्व अध्यक्ष शर्मा कांग्रेसका निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् । गत संविधानसभा निर्वाचनमा उनी झापा १ बाट झिनो मतले पराजीत भएका थिए ।
एक नम्बर प्रदेशमा कांग्रेसको तर्फबाट अमृत अर्यालको पनि चर्चा छ । उनी मोरङ कांग्रेसका पूर्व सभापति हुन् । एक नम्बर प्रदेशको मुख्य मन्त्री छनौटमा नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको भूमिका रहने देखिन्छ । सिटौला कांग्रेस भित्र आफ्नै गुट निर्माणमा जुटेका छन् ।
तर अहिले सिटौला रामचन्द्र पौडल गुटसँगनै नजिक भएका छन् । विश्वप्रकाश शर्मा कांग्रेस महाधिवेशनको समयमा पौडेल गुटबाट देउवा गुटमा लागेका थिए । विराटनगरका नेता अर्याल चाहिँ कांग्रेसमा कोइराला परिवार निकट मानिन्छन् ।
प्रदेश नम्बर एकमा एमालेबाट भीम आचार्य, योगेश भट्टराई, हिक्मत कार्की र शेरधन राइको चर्चा छ । हिकमत कार्की एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका नजिकका पात्र हुन् । शेरधन राई चाहिँ एमालेमा छिटो पदमा पुगेका नेता हुन् । एमालेबाट अशोक राई संघीय समाजवादी पार्टी गठन गरेपछि शेरधनले जनजाती समुहमा ठाउँ पाएका हुन् । उनी अहिले पोलिटव्युरो सदस्य छन् ।
आचार्य र भट्टराई चाहिँ एमाले भित्रकै हाइ प्रोफाइल नेता हुन् । अखिलका पूर्व अध्यक्ष भट्टराई काठमाडौंको ६ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई पटक सम्म चुनाव हार्ने नेता हुन् । यसपटक उनले मतदाता नामावली ताप्लेजुङमा सारेका छन् । कुनै बेला बामदेव गौतमको समुहमा भट्टराई अहिले चाहिँ माधव नेपालको कोर टिममा छन् । झलनाथ खनाल निकट आचार्य दुई पटक सम्म सुनसरीबाट संविधानसभा चुनाव जितेका सांसद हुन् । संविधानसभामा एमालेको प्रमुख सचेतक र संस्कृति पर्यटन मन्त्री बनेका आचार्य एमाले सचिव हुन् ।
प्रदेश नम्बर दुई
प्रदेश नम्बर दुईमा कांग्रेसबाट आनन्द ढुंगाना, फरमुल्लाह मन्सुर र महेन्द्र यादवको चर्चा चलेको छ । यादव अहिले खानेपानी मन्त्री छन् । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिका नजिकका पात्र यादव तरुण दलको पूर्व अध्यक्ष पनि हुन् । मुख्यमन्त्रीको चुनावलाई लक्षित गरेर पर्वतका अर्जुन जोशीको नाम काटेर देउवा सरकारमा यादवलाई मन्त्री बनाइएको थियो । कतिपयले कांग्रेस सांसद अमरेश कुमार सिंहलाई मन्त्री मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा चर्चा गरेका छन् ।
फर्मुल्लाह मन्सुर अहिले श्रम मन्त्री हुन् । कोइराला परिवार नजिक भएर राजनीति गरेका मन्सुर कांग्रेस महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा देउवा गुटमा छिरेका हुन् । धनुषाबाट राजनीति गर्ने ढुंगाना कोइराला परिवार निकट रहेर राजनीति गरेका थिए । सुशील कोइरालाको निधनपछि उनी कर्नरमा छन् । पहिले निर्वाचित सांसद रहेका उनी अहिले समानुपाती सांसद हुन् ।
कांग्रेस भित्रको व्यवस्थापकिय क्रियाकलापमा उनी सक्रिय छन् । देउवाको टिमबाट उम्मेदवार बन्ने भएमा यादवको सम्भावना छ भने पौडल समुहले पाएमा चाहिँ ढुंगाना उम्मेदवार बन्ने सम्भावना रहेको छ ।
एमालेबाट स्थायी कमिटि सदस्य सत्यनारायण मण्डल, नागेन्द्र चौधरी र रघुवीर महासेठको चर्चा दुई नम्बरको मुख्य मन्त्री उम्मेदवारको रुपमा छ । स्थानीय चुनावमा दुई नम्बर प्रदेशमा एमाले कमजोर शक्ति हो । कुनै पार्टीसँग चुनावी तालमेल गरेमा मात्रै एमालेले मुख्य मन्त्री जित्ने सम्भावना रहने नेताहरु बताउँछन् ।
महासेठ धनुषामा २०६५ सालमा भएको उपचुनावमा उनी पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवको ठाउबाट सांसद बनेका थिए । महासेठ एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष उपेन्द्र महतोका ज्वाईं समेत हुन् । दुई नम्बरमा महासेठले नै टिकट पाउने सम्भावना धेरै रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
प्रदेश नम्बर तीन
प्रदेश नम्बर तीनमा कांग्रेसको तर्फबाट पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा र पूर्व उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको नाम मुख्य मन्त्रीको रुपमा चर्चामा छ । दुवैले गत संविधानसभा चुनावमा काठमाडौंबाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेका थिए । प्रचण्ड सरकारमा सहभागि यी दुइ नेता कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता हुन् ।
जोशी रामचन्द्र पौडेलका विश्वासपात्र मानिन्छन भने थापा सिटौला समूहबाट महामन्त्रीमा लडेर पराजित भएका थिए । उद्योग मन्त्रीको रुपमा गरेका कामका कारण जोशीलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अगाडी सार्ने पौडेल समूहको तयारी छ ।
तीन नम्बर प्रदेशमा एमाले बलियो शक्ति मानिन्छ । तीन नम्बरमा एमालेका तर्फबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र पाण्डे र शेरबहादुर तामाङको चर्चा छ । सबै प्रभावशाली नेता नै भएकोले कसले टिकट पाउँछ भन्नेमा अनुमान गर्न गाह्रो ठानिएको छ । शाक्य र तामाङको बढी सम्भावना छ । तीन नम्बर प्रदेश तामसालिङ क्षेत्र भएकोले शेरबहादुर तामाङलाई एमालेले अगाडी सार्ने सम्भावना रहेको एमाले स्रोतहरु बताउछन । ०७० को चुनावमा उनले सिन्दुपाल्चोकमा राप्रपा नेता पशुशपति शम्शेर राणालाई पराजीत गरेका थिए ।
पूर्व मन्त्री समेत रहेकी शाक्य कम्युनिष्ट आन्दोलनकी पुरानी नेत्री हुन् । काठमाडौं उपत्याकाको नेवार समूदायको समेत सहानुभूतिका लागि एमालेले शाक्यलाई अगाडी सार्ने सम्भावना रहेको एमाले बृत्तमा चर्चा छ ।
प्रदेश नम्बर चारमा कांग्रेस नेताहरु धनराज गुरुङ, शंकर भण्डारी र ध्रुव वाग्लेको नाम मुख्य मन्त्रीको रुपमा चर्चामा छ । प्रदेश नम्बर चार कांग्रेस बलियो भएको प्रदेश हो । नेविसंघ र तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष गुरुङ कांग्रेस भित्र स्पष्ट वक्ताको रुपमा चिनिन्छन् ।
प्रशिक्षण विभागमा रहेका गुरुङलाई गुरुङ बाहुल्यता रहेको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रुपमा कांग्रेसले अगाडी सार्ने तयारी गरेको छ । खुम बहादुर खड्काको छत्रछायाँमा रहेका शंकर भण्डारी पनि मुख्य मन्त्रीका दावेदार हुन् । कांग्रेसका युवा नेता धुर्व वाग्लेको पनि मुख्यमन्त्रीको आकाक्षी उम्मेदवार हुन् ।
एमालेबाट रवीन्द्र अधिकारी, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ र खगराज अधिकारीको नाम चर्चामा छ । कास्कीबाट संविधानसभा चुनावमा दुइपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित रवीन्द्र संसदको विकास समितिका सभापति हुन् । अखिलका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका अधिकारी मुख्यमन्त्रीका बलिया उम्मेदवार हुन् । पृथ्वीसुब्ब एमाले संगठन विभाग प्रमुख हुन् । प्रदेश संयोजक किरण गुरुङ पनि मुख्यमन्त्रीका प्रतिस्पर्धीको रुपमा देखिएका छन् ।
प्रदेश नम्बर पाँच
पाँच नम्बरमा बालकृष्ण खाँण, चन्द्र भण्डारी, देवेन्द्रराज कंडेल र पुषा भुसालको नाम कांग्रेसमा चर्चा छ । तरुण दलका पूर्वअध्यक्ष खाँण देउवाका प्रिय पात्र हुन् । दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित खाँणले उम्मेदवार बन्न खोजेमा अरुको सम्भावना कम छ । पाँच नम्बरमा कांग्रेस कमजोर शक्ति हो ।
पाँच नम्बर प्रदेशमा एमालेका धेरै नेताले आँखा लगाएका छन् । एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवद्वय प्रदीव ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटि सदस्य शंकर पोखरेल र छबिलाल विश्वकर्मा समेतलाई उम्मेदवारको रुपमा हेरिएको छ ।
तर एमाले उपाध्य बामदेव गौतम, युवराज ज्ञवाली र पूर्व अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलको रुची पनि उम्मेदवार छनौटमा देखिनेछ । पाँच नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रुपमा एमालेमा विष्टको ज्यादा चर्चा छ । उर्जामन्त्री रहेको समयमा उनले उल्लेख्य काम गरेका थिए ।
प्रदेश नम्बर ५ मा माओवादी केन्द्रबाट टोपबहादर रायमाझीको समेत चर्चा छ ।
प्रदेश नम्बर ६ मा कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्य मन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा हेरिएको छ । सुर्खेतका हृदयराम थानीपनि मुख्य मन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने सम्भावना रहेको छ । ६ नम्बर प्रदेशमा तीन वटै ठूला दलको बराबर जस्तै प्रभाव रहेको छ । शाही देउवा समूहका हुन भने थानी पौडेल समूहका ।
एमालेबाट प्रकाश ज्वाला, यमलाल कंडेल र गोरखबहादुर बोगटीको चर्चा छ । ६ नम्बर प्रदेशमा एमाले थोरै सिटकासाथ स्थानीय निर्वाचनमा अघि छ । तर यहाँ माओवादीको प्रभाव पनि राम्रो छ । माओवादी र कांग्रेसका बीचमा चुनावी एकता हुने सम्भावना पनि रहेको छ । पहिलो संविधानसभा चुनावमा प्रत्यक्ष जितेका कडेल दोस्रो संविधानसभा चुनावमा कांग्रेसका थानीसंग पराजीत भएका थिए ।
प्रदेश नम्बर सातमा कांग्रेस नेता रमेश लेखक, एनपी साउद र बिरबहादुर बलायरको नाम चर्चा छ । देउवाका विश्वासपात्र लेखक प्रदेशमा जान चाहेमा उनले टिकट पाउने सम्भावना रहन्छ । यदि उनी प्रदेशमा जान नचाहेमा चाहिँ बलायरले टिकट पाउने सम्भावना रहेको छ । सावदपनि एकजना उम्मेदवार हुन् ।
प्रदेश नम्बर ७ मा एमालेले कर्णबहादुर थापा र भानुभक्त जोशी मध्ये एक जनालाई उठाउने सम्भावना रहेको छ । तर प्रदेश नम्बर ७ मा एमालेको तुलनामा कांग्रेस बलियो शक्ति हो । प्रदेश नम्बर ७ को मुख्य मन्त्री उम्मेदवार छनौटमा एमाले नेता भीम रावलको हात रहने सम्भावना छ । माओवादी केन्द्रले लेखराज भट्टलाई अगाडि सार्ने सम्भावना रहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए ।